Kusho ukuthini ukushintsha kwesilinganiso senzalo? Incazelo encwadzini yezezimali
Qala ukubolekisa Wiki Isilinganiso senzalo eguqulayo
Isexwayiso: Hlukaniswa ngo-zero /var/www/vhosts/isearch.de/httpdocs/wp-content/plugins/gd-rating-system/methods/stars-rating/load.php on line 180
Isexwayiso: Inani elingeyona izinombolo okuhlangatshezwe kulo /var/www/vhosts/isearch.de/httpdocs/wp-content/plugins/gd-rating-system/methods/stars-rating/load.php on line 180
Isexwayiso: Inani elingeyona izinombolo okuhlangatshezwe kulo /var/www/vhosts/isearch.de/httpdocs/wp-content/plugins/gd-rating-system/methods/stars-rating/load.php on line 181
Isexwayiso: Hlukaniswa ngo-zero /var/www/vhosts/isearch.de/httpdocs/wp-content/plugins/gd-rating-system/methods/stars-rating/load.php on line 181
Ingabe udinga ukuboleka imali? Manje ungasebenzisa izinketho ezihlukahlukene. Kuhlale kubalulekile kumboleko owukhokhela wona. Qiniseka ukuthi unayo imali eyanele yokwenza. Manje kukhona okuthiwa Isilinganiso senzalo eguqulayo, Lokhu kukuzuzisa kakhulu ezimweni eziningi, kepha kungabangela nokulimaza. Abakhokhi intela yesithakazelo esinqunyiwe, njengezinkokhelo eziningi, kodwa inani elinqunyiwe eligcinwe enkontileka.
Lokhu kushintsha njalo. Okusho ukuthi, intela yesithakazelo ekuguqulweni kwemakethe njalo ngenyanga noma ngekota, futhi kuye ngokuthi kulungile kanjani manje ukuthi uzokhokha inzalo encane. Noma kunjalo, isivumelwano sokuthenga ngesikweletu sokuqala asihlangene naso. Lokhu kusalokhu kungathinteki ukushintshwa kwesilinganiso senzalo futhi lokhu kuzuzisa ngempela kuwe. Ngakho-ke ungakwazi ukukhokha imali. Kunoma yikuphi, kufanele uqale ubheke izinhlangothi zombili ngaphambi kokusebenzisa ukushintshwa kwesilinganiso senzalo. Umcebisi webhange uqobo nguye oxhumana naye ofanele ngalokhu. Ngakho uzobona ukuthi kungabasiza ukuthola ulwazi olusengaphambili. Ngakho uqinisekile ukuthi ungakwazi ukukhokhela iphrojekthi yakho nhlobo. Kufanele uqiniseke ngokuphelele ukuthi uhle ngempela kulo futhi ubheke ukushintshwa kwesilinganiso senzalo kaningi. Ngakho wazi ngokushesha ukuthi kufanele ukhokhe futhi ungathola ulwazi oluthe xaxa. Ukushintshwa kwesilinganiso senzalo ngokuqinisekile kuyindlela engcono kuwe, uma ufuna nokuwina okuthile. Kodwa akufanele nje ubone izinzuzo kulolu hlobo lwamasistimu, kodwa futhi kungabonakali. Namuhla kungukuthengiswa kwemithetho eminingi okungasebenza kahle. Kufanele uhlale wazi ukuthi kusengaphambili ngamathuba akho afinyelele kakhulu.
Kuphela uma uqinisekile ukuthi ungenza ibhizinisi elihle futhi uzoba nakho okuningi. Ukushintshwa kwesilinganiso senzalo kungase kube inzuzo yakho. Kodwa wena wedwa unquma ukuthi yilokho okulungile kuwe. Kumele ulinganise kahle, ngoba esimweni esibi kunazo zonke ungaphinde ulahlekelwe imali. Isilinganiso senzalo eguquguqukayo into okufanele uxoxisane ngokuqinisekile nomxhumanisi. Kumele uthathe isikhathi salesi sikhundla bese uthola konke okuchazwe kahle. Uma unemibuzo, kufanele ubuze ngokushesha.
Umbhanki uyojabula ukuchaza izinzuzo kanye nokungahleleki kokushintshwa kwezinga lesithakazelo. Ngakho uqiniseke ngokuphelele ukuthi awuphuthelwa lutho futhi usebenzise wonke amathuba akhona. Qinisekisa ukubheka isivumelwano ngaphambi kokusayina. Kufanele uqiniseke ngokuphelele ukuthi ngeke uhambe kabi kamuva. Inkontileka inakho futhi ungabuye ubheke imibhalo nommeli. Kufanele wenze i-aphoyintimenti ukuze uqonde le nkontileka kahle. Kubaluleke kakhulu kunanini ngaphambili ukubheka kuzo zonke izivumelwano. Iningi lemali mboleko isetshenziselwa ibhange lasekhaya. Kuphela uma unomuzwa omuhle, ungasebenzisa ukushintshwa kwezinga lesithakazelo. Ngakho kufanele ubheke ngokucophelela futhi ufunde inkontileka kahle. Uma usuwenzile lokho, ungayisayina ngonembeza ohlanzekile. Uma ungaqiniseki, awudelanga ukuyisebenzisa futhi usebenzise isilinganiso senzalo esinqunyiwe.
Isilinganiselwa: 3.5/ 5. Kusuka kumavoti angu-2.
Uvotele NAN, Izinyanga ezingu-9 ezedlule.
Isihloko sangaphambiliniIsilinganiso senyanga
Isihloko esilandelayoAC Isaphulelo credit